Mormii Iraan: Lammiilee qeequudhaaf malee balleessaaf mirga hinqaban jedhu -Ruhaaniin. - BBC News Afaan Oromoo
Mormii Iraan: Lammiilee qeequudhaaf malee balleessaaf mirga hinqaban jedhu -Ruhaaniin.
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Haasan Ruhaan haala dinagdee laafaa biyyattii keessa jiruu komatamu.
Mormii motummaa irratti Iraan gutuutti alkan gaggeefameen namoonni kudhan ajjeefamusaanii, televisziiniin motummaa beeksise.
"Taatee alkan darbeetiin walumagaa galatti namoonni 10 magaalawwan adda addaa keessatti ajjeefamaniiru, jedheeras. Erga kamisa darbeetii mormichaan walqabatee naomoonni 12 ajjeefamaniiru.
Pirezidaantiin biyyattii Haasan Ruhaaniin akka tasgabbaa'aniif waamicha taasisanis ammalleen mormiin akkuma itti fufeetti jira.
Pirezidaantichis haasaa isaanii jalqabaa Dilbataatiin jeequmsaaf obsa akka hinqabaannee akkeekachiisanii ture.
Pirezidaantiin Iraan Haasan Ruhaan lammiileen motummaa mormuun hiriira taasisuun ni danda'u garuu nageenya biyyatii balaarra busuuu hinqabaatan jechuun dubbataniiru erga hiriira mormii guyyoota afuriif taasifameen booda.
Haasaa waligahii kaabinee irratti taasisaniin, rakkinni jiraachu isaa amananii garuu jeequnsi akka hinobsamne himaniiru.
Mormiiwwan kunneenis erga bara 2009 asii akka mormii olaanaatti kan taasifamedha.
Magaaloota hedduu keessatti walitti bu'insii umamee kan ture yoo ta'e, Iraan akka mormiin hin taasifamne dhorkuuf jecha midiyaalee hawaasaa daangeessitee turte.
Daandeessuun yeroodhaaf appiiwwan kan akka Telegraam fi Instagram irratti taasifamanis gabaasawwan Ejansii oduu motummaa Irib irratti dhiibbaa tasisera.
Mormichis kan eegalee kaaba baha biyyattiitti rakkina dinagdee fi dabalii gatii sababeefachuun yoo ta'u, innis booda keessa gara mormii siyaasaatti geedarameera. Mormiin kunneenis ogganaa mama murtii olaanaa Ayaatolaah Ali Khaameneii, Mr Ruhanii fi lamiilee biyyattii imaamata alaa jidduu gala irraatti kan xiyyeefate ture.
Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp barreefama twiitii isaanii kan dheenyaatiin akka jedhaniitti, Iraanoonni 'haala maallaqni fi qabeenyaan isaanii itti hatamuu fi shororkessummaa irra itti olfamu irratti dhumaratti abshaalomaa jiru.''
Pireezidaantiin Iraan Mr Ruhaan garuu haasaa isaanii duraatiin Mr Tiraampiin qeeqanii turan.
''Jareen Ameerikaa kunneen kan amma biyya keenyaaf gaddaa jiran, baatii muraasaan dura biyya Iraan shorkeesituu jechu isaa hin irranfate fakkaata,'' jechuun dubbatanii ture.
''Namichi dinagdee iraaniitti mataadhaa hanga miilaatti diina ta'ee kunis, lammiilee Iraan waliin gadduuf mirga hinqabu,'' jechuun itti eeda'aniiru.
Pirezidaantiin iraani akka jedhanittis, lammiileen iraan, ''komii motummaarratti qaban ibsachuu fi mormiif bahuuf mirga guutuu qabu...garuu karaawwan haala biyyattii fooyya'iinsatti qajeelchuun ta'u qabaata,'' jedhaniiru.
Arii haala dinagdee, dhabiinsa iftoominaa fi malaamaltummaa jiru kan fudhata yoo ta'u, galmee isaanii dhoksaniiru.
Kana malees, Mr Ruhoon qeequuniifi jeequmsi ykn qabeenyaa uummataa barbadeessuun waan garaa garaatii jedhaniiru.
Jeequmsi guyyaa Sanbataa guutuu biyyattiitti babalattee kan ture yoo ta'u, vidiyoowwan inarneetiin gadiifaman akka agarsiisanitti Dilbatas itti fufuun magaaloota biyyattii kan birraa keessattis babalate jira.
Akka vidiyoon BBC Parshiyaan argate mul'iseettis, namoon muraasni walitti qabamuun magaalaa guddittii Tehiraan keessatti, ''duutii abbaa hirreetiif'' jechuun dhaadataa kan turan yoo ta'u, poolisiin mishaanitti fayyadamuun hiriiricha bittinseera.
Goodayyaa suuraa Sanbata darbe Yunivarsitii Taahiraan keessatti mormii ture